Kedu ụdị ihe ọghọm igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ọnụ ọgụgụ ọgba aghara ọgba tum tum - olee otu anyị si edozi
Ọnụ ọgụgụ ọgba aghara ọgba tum tum - olee otu anyị si edozi
Kedu ụdị ihe ọghọm igwe kwụ otu ebe?
Isi nkeIhe ọghọm anyịnya igwena United States
Na 2015, e nwere 45,000 kọrọihe mberede igwena United States, ihe ruru 50,000 kọọrọihe mbereden'afọ bu ụzọ. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ nke na-egbu egbuihe mberedemụbara karịa 12% n'otu oge ahụ.Dec. 1 2019
(egwu elektrọnik) - Ọfọn, lee, anyị nọ na Chamberythe ụtụtụ mgbe ọ gachara Roubaix nke 2018 Tour de France ma anyị nwere ihu ọma iji nọrọ ọkara elekere na Dr. Kevin Sprouse, dọkịta otu na Team EF Drapac. Kevin, daalụ maka oge gị.
Nwere ike ịgwa m ihe bụ mmerụ ahụ ise kachasị na-ahụ ndị ọkwọ ụgbọ ala. - Echere m na ọnụọgụ nke mbụ bụ ọkụ ọkụ n'okporo ámá, ọ dịkwa nwute na anyị hụrụ na ụnyaahụ ma ọ bụ ihe anyị bụ m na-arụ ọrụ na-aga n'ihu ugbu a. O siri ike ịhazi ha n'usoro nke ugboro ole o nwere ụfọdụ ụzọ aghụghọ, mana echere m na m ga-agafe ihe ise m hụrụ kacha. Ya mere, ọkụ n'okporo ámá, mgbaji ọkpụkpụ, nkwonkwo aka, dị mwute ikwu na mgbagha, na nsogbu ikpere.
Ndị a na-ejikarị arụ ọrụ na-adịghị ala ala - yabụ ka anyị bido site n'okporo ámá ma ọ bụrụ na ọ dị mma. Mgbe m bụ onye ọkwọ ụgbọ ala anyị na-egwuri egwu mgbe niile na ọ dị obere ma na-adịchaghị mkpa, m na-ekwu na ọ bụ nke elu ọnụ, mana ọ nwere ike bụrụ nsogbu dị oke njọ, ọkachasị mgbe ọ bụ nnukwu mpaghara ma ọ bụrụ na ọ na-akpata nnukwu ahụ erughị ala, ọ nwere ike ịgbanwe ụdị ịkwọ ụgbọala. Nwere ike ịgwa m ihe ị chọrọ ka ị hụ maka ọtụtụ nsogbu okporo ụzọ? - O doro anya, na ịgwọ ọkụ ọkụ n'okporo ámá nke a bụ ụdị nwatakịrị nke bụ akpa aghụghọ m na-ebu m, anyị na-eji teepu ịwa ahụ na-arụ ọrụ iji jide ya.
Omnifix bụ ihe m nwere, mana anyị na - ejide ihe dị na ụlọ ahịa ọgwụ mgbe anyị mechara. Ma nke ahụ bụ teepu m na-eji, Telfa bandeeji bụ naanị a na-abụghị osisi gauze, ihe ị nwere ike mfe nweta na mpaghara gị ahịa ọgwụ. O nwere ike ịbụ na ị hụla ya mbụ, ụdị uwe na-egbu maramara ka ọ ghara ịrapara na ọnya nke anyị na-etinye mmanụ ude atọ na atọ.
Na United States anyị na-akpọ Neosporin a, nke a bụ ụdị mkpụrụ ndụ mana ị na-etinye ya ebe ahụ ma ọ na-aga ọnya ọnya Jiri ihe ị hụrụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala, ụgbụ a na-ere ọkụ. Ya mere, nke a bụ ihe nwa m nwanyị asaa hụrụ n'anya n'ịgba ịnyịnya na ọ nọ ebe mgbe ọ dara ma na-ekwusi ike na m ga-etinye ya na ikpere ya na ikpere ya. Ma eleghị anya ị hụla nke a na ndị na-agba ịnyịnya na peloton ndị na-etinye bandeeji.
Anyị ga-eji ya ọtụtụ na ikpere na ikpere, ebe ndị ahụ na-agagharị mgbe ọ bụla n'ụkwụ nke elekere anọ na isii, ma ọ bụghị ya, ihe a ga-amalite ịgbanwe ma na-awagharị mgbe ọ na-agba ọsụsọ na ị ga-akwụsị ịmịcha ihe. apụ ma nwee ike iwe iwe dinara ala ma jigide ihe a niile. Ihe a niile bụ ihe ị ga - enweta site na ụlọ ahịa ọgwụ. Youchọghị akwụkwọ ikike ahụike pụrụ iche ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ dị mfe - Ya mere, olu akwa, anyị na-akwa emo dị ka ndị na-agba ígwè na ị bụghị ezigbo onye na-agba ịnyịnya ruo mgbe ị ga-agbaji eriri olu gị, nke na-abụghị eziokwu.
Ma ọ bụ ihe dị ukwuu- (chịrị ọchị) - A ka nwere nke m - Ọ bụ mmerụ ahụ igwe na-ahụkarị, ọ bụghị ya? ọ? - Ọ bụ.- Nke mbụ, ị nwere ike ịgwa anyị ntakịrị ihe kpatara ya? O nwere ihe ọ bụla jikọrọ ya na nnyefe ike, mgbe mmadụ- Kpamkpam, ọ na-eme cy ts.
Ma mgbe aka gị dị na ogwe osisi ma ị na-ejegharị na oke ọsọ, ị na-ahụkarị mgbe ụfọdụ ka ha na-aga n'elu ha Osisi na-aga, mana ọtụtụ oge enwere otu ụzọ ị ga-esi zere ịda na wiilị ahụ na - agba, mgbe ahụ ha gbadaa n'akụkụ, na ebumpụta ụwa ebumpụta ụwa, na mpiaji, bụ iru na na ike ga-agafere elu, na mgbe mgbe na olu akwa, nke bụ ụdị nke S-ekara ọkpụkpụ, nwere adịghị ike ebe na yinye na ọ gbawara - ee, ị ga-egosi m igwe igwe ultrasound a dị egwu. Gwa m maka ya, yabụ --- ee, ọ dị mma, na njegharị anyị ‘enwere m nnukwu ihu ọma ịnwe igwe X-ray na njedebe nke ọkwa ọ bụla. Ha anaghị eme nke ahụ n’ọtụtụ agbụrụ.
Giro na-eme ya, mana m chere na ọ bụ naanị agbụrụ abụọ ndị a, yabụ mgbe anyị 'na-echegbu onwe anyị maka mgbaji, mgbe ahụ anyị na-achọ ụlọ mberede, ụlọ ọgwụ. Ọ bụ logistically-achọ. Mgbake ọkwọ ụgbọala na ihe niile o nwere nwere ike iwe ogologo oge. Ugbu a anyị nwere uru ọzọ enwere na ịnwe ngwaọrụ ndị a, igwe igwe ultrasound nke nwere ike nyochaa ọkpụkpụ dị elu dị ka olu akwa, nwere ike ileba anya na nkwojiaka, aka na ịtụba. ụkwụ Gịnị ka anyị chọrọ ịhụ? Mkpụrụ aka. - Scaphoid? - Ọkpụkpụ Scaphoid, ka anyị leba anya na redio dị anya ebe a na-agbada n'ime ọkpụkpụ scaphoid.
Na anyị na-agbada, ọ bụrụ na ị nwere mgbaji ọkpụkpụ mgbe ahụ anyị nwere ike ịhụ na nri ebe akara ahụ na-aga n'ihu na a ga-enwe ibiaghachi, nke pụtara ìhè - ọ dị mma Kevin, biko ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na nkwojiaka ma gwa aka mmerụ ahụ ? - O doro anya, ya mere, anyị ekwuola banyere eriri olu na ihe kpatara ndị ọkwọ ụgbọala ji ejedebe ụdị gbagọrọ agbagọ ma na-agbadata na aka gbatịrị agbatị na olu olu na-achọ ibute ya, mana olee otu ị chere na ọ bụ nkwojiaka na aka , na-egbu egbu mmerụ ahụ n'ezie, mana ọkpụkpụ nke nkwojiaka na obere ọkpụkpụ dị na ntọala aka, ụdị ebe aka na-ezute nkwojiaka, na-abụkarị ndị a metụtara daa. Ọkpụkpụ bụ ọkpụkpụ ebe a n'akụkụ mkpịsị aka isi, n'akụkụ aka nke nwere mkpịsị aka ahụ, mgbe ahụ ulna gafere ebe a.
Ọkpụkpụ scaphoid bụ obere ọkpụkpụ nke na-anọdụ kpọmkwem na ntaneti a - ee - ọ na-emerụkarịkwa ahụ. Yabụ mgbe onye na-agba ịnyịnya gbadara, anyị na-elekarị ọkpụkpụ ndị ahụ anya, na cartilage na akwara - ee. - Nke ahụ gbara gburugburu na mgbe ahụ ọkpụkpụ n'ebe ahụ na ntọala aka. - Ee. - Mana ụfọdụ n’ime ha siri ike ịgwọ, ma ya mere mmadụ agaghị esoro ha nya ụgbọala.
Ga-apụ na-agba ọsọ. Ma obere ọkpụkpụ scaphoid ahụ, n'ihi ụzọ ọbara si abanye, ọ na-abịa n'eziokwu, ọkọnọ ọbara na-agbada, ọ na-agabiga n'ọkpụkpụ wee laghachi azụ n'akụkụ ya, yabụ ọ bụrụ na ị gbajie ọkpụkpụ ị nwere ike, ị ga-egbutu n'ezie ọbara, nke doro anya na-eme ka ọ sie ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, ịgwọ ọrịa. Ọbụna obere mgbaji ọkpụkpụ a na-arụ ọrụ oge ụfọdụ ka ị wee chọọ ịhụ ha n'isi - ya mere gwa m gbasara ikpere.
Ọ bụ otu n'ime ihe ole na ole m na-emeghị ihe ọ bụla na igwe kwụ otu ebe, ya mere (ọchị) - Zuru oke! Enweghị ikpere, o doro anya na enwere mmerụ ahụ na ikpere, yabụ ị dapụrụ igwe kwụ otu ebe, gbanye ikpere gị, nke ahụ bụ nsogbu na-abịa, mana n'eziokwu, ọ bụ? Ahụrụ m karịa ikpere ka enwere mmerụ ahụ na-adịghị ala ala ma ọ bụ nsogbu na nhazi.
Ọ na-abụkarị ya. Ọgwụgwọ dabere n’ihe kpatara ya. Nke ahụ na-apụtakarị ịlaghachi azụ na ilegharị anya na mmegharị ha, na-elele usoro ike ha, na-ele anya na ha dabara adaba.
Hà agbanweela olu ha? Hà agbanweela ogologo ịnyịnya ha? Oge ụfọdụ, ha nwere ike ha emebeghị ihe ndị a n’uche, ya mere, ha na-apụ ma na-agaghachi ma ha na-alaghachi n’elu igwe kwụ otu ebe na oche na-amị amị ntakịrị na anyị nwere ka ha tụọ ya na ọ dịka, ah, ọ dị sentimita abụọ. ala ma ọ bụ anụ ọhịa ma ọ bụ ihe ọ bụla na-etinye ikpere na ikpere na ihe mere ọ na-ewute - Kevin, Concussion, Echetara m ya nke ọma. Ahụ adịghị eru ya ala. Gwa anyị gbasara nchoputa na ihe ị ga-eme onye na-agba ịnyịnya ibu - Ya mere mgbagha bụ ihe na-emetụta ndị na-agba ịnyịnya na anyị na-ahụ ya karịa afọ, yana ihe anyị mụtara dịka obodo ahụike. afọ ise gara aga na afọ iri anyị nwere ike iji ndị nwoke kpọrọ ihe karịa.
N'agụmakwụkwọ m, nchoputa mkparịta ụka na ọgwụgwọ bụ nnukwu akụkụ nke egwuregwu egwuregwu na ihe anyị lekwasịrị anya nke ukwuu. Echere m na ị hụrụ na ịgba ịnyịnya ígwè na nke a gosipụtara, na anyị na-etinye usoro iwu ndị a n'ọrụ, anyị na-amalite ịghọta ya ma na ịmatakwu ya nwere ike isi ike n'ihi na ịkọwapụta mkpaghasị bụ nke nwere isi nke pụtara na enweghị nnwale nke ahụ na-agwa anyị na mmadụ nwere mgbagha. Nweghị ike i themomi ha, ị nweghị ike ịme nyocha ọbara, yana ọ dị ezigbo mkpa ịlele nguzo ha, ọ na-ele ebe nchekwa na ncheta ha, na ọ na-elekwa anya mgbaàmà ha na-agwa anyị.
Yabụ n'echiche, anyị nọ n'ebere ha n'ihe ha na-agwa anyị. - Ọ na-esiri m ike iche n'echiche, dịka dọkịta, ị nwere ike, ọ ga-esiri m ike ịkwụsị ụdị nyocha ọ bụla ma ọ bụ gbalịa ịme opekempe nyocha mbụ n'okpuru nrụgide oge, n'ihi na ọ nwere ike ịbụ ihe nchekwa karịa maka anyị Ndị na-ekiri Ka ọchịchọ gị nwere ike ịdị, ọ bụrụ na ị dọpụta mmadụ n'ụbọchị atọ nke Grand Tour ma ha mee ya? Enweghị mgbagha? Naanị n'ihi na ịnwere ike ịkụ isi gị, ịnweghị ike ịme nke ahụ, ọ dịghị mma ndị otu ma ọ bụ onye ọkwọ ụgbọ ahụ.- Mba- yabụ ị ga-eji obi abụọ iji gaa n'ihu, ịmalite, maa m. ga-egwu ya ọfụma.- Ee. - Ọ bụrụ na enwere m nchegbu --- Ee.- Ọ bụrụ na ihe adịghị mma, mere.- Ee.- Ma ọ bụrụ na m ga-adọta mmadụ na-enweghị mgbagha, n'agbanyeghị na m ekwesịghị inwe, ọ ga-akara m mma ịme mkpebi ahụ.
Ugbu a, ọ ga-eri m. (ọchị) - Ee - Ọ bụrụ na anyị laghachi na họtel na ihe niile dị mma, m ga-agbacha onwe m, mana ọ ga-akara m mma karịa iweghachi ha ma kụọ m ihe maka ebumnuche ndị ọzọ. - Ee - Ihe ọzọ dị aghụghọ banyere mgbagha bụ mgbaàmà, nke na-apụtakarị oge. - Ee.- Na ahụmịhe m ọ bụ ihe ọhụụ na onye na-agba ịnyịnya agbadata, kụọ isi ya wee guzoro ebe ahụ n'ụgbọala ma nwee mgbaàmà mgbagha ozugbo.-Ee.
Kevin, daalụ nke ukwuu, nke ahụ masịrị ìgwè mmadụ ahụ nke mere na ndị na-ahụkarị ndị ọkachamara na-ahụkarị nwere ike ịbụ ọnya okporo ụzọ, ọkpụkpụ agbaji, nkwonkwo aka, mkparịta ụka na mgbu ikpere na echere m na nke a nwere ike ịbụ otu ihe ahụ maka ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya egwuregwu. . Enwere m olileanya na ị hụrụ nke a. Kevin, daalụ ọzọ na ọdịmma maka njem ndị ọzọ.- Daalụ.- Ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, nye anyị isi mkpịsị aka, pịa Idenye aha wee pịa ebe a maka inwekwu njegharị.
Mmadu ole na-anwu n’igwe?
Ndị ịnyịnya ígwè 840 Americagburuna mkpọka na ugbo ala ugbo ala na 2016 na-anọchite anya karịa abụọọnwụ kwaotuụbọchị. Ọnwụ ndị a mejupụtara pasent 2.2 nke ngụkọta ọnwụ. N’ụzọ dị mwute, ọnụọgụ a amụbaala site na 2015, mgbe 829ndị mmadụnọgburu.Jenụwarị 17 2021
Diadora igwe kwụ otu ebe
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, tinye isi na ájá ma duzie nwee mkparịta ụka kwesịrị ekwesị na nyocha nke ihe bụ nsogbu bụ, ọ bụrụ na enwere akara uhie ọ bụla iji mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha Yabụ enweghị njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ọrịa prostate, mana ọrịa prostate bụ nnukwu ihe maka nnukwu akụkụ nke ndị ọgba tum tum Nsogbu naanị n'ihi na ha bụ ụmụ nwoke, ha emeela agadi, ya mere, ha kwesịrị ichebara ya echiche. Amaghị m gbasara gị mana ụzọ m ga-esi wepụ mkparịta ụka a ya na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara ileghara ahụike anyị anya, anyị kwesịrị ịnwụ ọnwụ nke anyị ma chọọ n'ezie enyere aka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị enweghị mkpa gs bụ ma eleghị anya nsogbu kachasị anyị ga - eche ihu ugbu a enwere ike ị gafere obere ozi mgbe m na - agwa gị gbasara mpempe akwụkwọ m na - eme n'okporo ụzọ ifufe mana echere m n'echiche ahụ anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike e otu Mkparịta ụka - Ma eleghị anya, ndị enyi anyị na klọb na-agba ya na ngwụsị izu a, ma ọ dịkarịa ala nwee nkata banyere isiokwu a echere m na nke ahụ ga-abụ ebe dị mma ịmalite. Ugbu a kwa, biko jide n'aka na ọ na-enye m nnukwu mkpịsị aka iji kelee Anthony maka oge ya na ahụmịhe ịkekọrịta anyị na anyị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ọzọ n'otu isiokwu ahụ.
Naanị anyị nwere otu na ọwa a ga - enyere gị aka ịzụta ihe ziri ezi maka ị ga - eche nsogbu mbụ nke ntị chiri ihu.
Ugboro ole ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ada ada?
GbanyenkeziOgbe 742ndị na-agba ígwènwuru onwuihe mberede igwekwa afọ. Dabere na Federal Highway Administration (FHWA). Site na 2007 rue 2018, 8,908ndị na-agba ígwènweenwụrụgafee U.S. Anyị were nọmba ahụ wee kee ya 12 iji nwetankezi.
Mmadụ ole na-agba ịnyịnya ígwè nwụrụ na 2020?
N'èzí magazine pegs na2020onye na-agba ígwèọnwụna 675 ruo ụbọchị, mana nke ahụ nwere COVID-19 ịchapu okporo ụzọ site naukwuudị ka pasent 41 maka ọnwa n'otu oge, dị ka Bloomberg si kwuo.12.22.2020
Fọdụ ndị anaghị akwụsị ịchụ ọsọ nke adrenaline nke na-abịa na ịkwanye envelopu ahụ n'ụzọ dị ukwuu - na nwute, oge ụfọdụ ihe egwu dị oke karịa ụgwọ ọrụ. Nke a bụ ileba anya na ndị ike dara ada tufuru ndụ ha na nzuzu. Ikekwe ikike mmadụ Baịlim nke Ba Ba nwere ike karịa karịa ka ochicho ndị mmadụ chọrọ ka ndị mmadụ na-ele ndị mmadụ anya na-eme ihe jọgburu onwe ya, nke mere ka ọ bụrụ ezigbo ihe na-egbu egbu.
N'ọnwa Ọktọba 2017, dibịa anwansi nke Lim Ba gbalịrị ị nọ na ya nwere oke wok na osikapa na ọka. Lim emeela ihe omume a maka ihe karịrị afọ iri, na-ejide ndekọ nke 75 nkeji na wok-ibu-ndụ. Kaosinadị, onye anwansi ahụ bịarutekwara mmadụ 70 wee na-agwọ ya maka ọbara mgbali elu. na nso nso a ka agafeela obi obi.
Ọ baghị uru ikwu, na ọ nọ na ahụ kacha mma mgbe ahụ ọ nwụrụ. Ihe dị ka nkeji 30 ka arụ ọrụ ahụ, Lim bidoro ịkụ aka n'ime. Mgbe e wepụrụ mkpuchi ahụ, ndị na-ege ntị hụrụ na ọ amaghị ihe ọ bụla - site na mgbe ndị ọrụ ahụike rutere ebe ahụ, Lim anwụọla.
Ihe kpatara ọnwụ bụ nkụchi obi, ọ bụ ezie na ndị uwe ojii hụrụ na onye na-eme ihe ahụ nwetakwara ọkụ nke abụọ. Kirk Jones: Enwere ihe gbasara Niagara Falls nke na - akpali mmụọ ike, n'agbanyeghị ngbanwe atọ na otu nke na - aga nke ọma na nke na - egbu egbu. N'ime ụmụ amaala niile nwara ịnya ụgbọ ala n'ofe mmiri ahụ, ma ọ bụ gbọmgbọm ma ọ bụ kayak, mmadụ iri na isii lanarịrị ma mmadụ isii nwụrụ.
Nke ahụ anaghị agụnye iri na abụọ nke ndị na-ahọrọ ịkwụsị ndụ ha na Horseshoe Falls kwa afọ, n'ezie - ma ọ bụ ihe karịrị 5,000 ahụ natara na ala nke ọdịda kemgbe 1850. Superman enweghị ike ịzọpụta onye ọ bụla dịka anyị chọrọ. Ndị ọchịchị hụrụ ozu Kirk Jones n'okpuru ọdịda na June 2, 2017, mana ọ nweghị onye yiri ka ọ maara ọtụtụ ihe banyere nwupụ ya. N'April, ndị uwe ojii chọtara 'bọọlụ na-afụ ọkụ' na-agafe ugwu ahụ, emesia ndị uwe ojii chọtara weebụsaịtị nke Jones akpọrọ 'Kirk Jones Niagara Falls Daredevil' nke nwere Jones na-ere T-shirts nke kwuru 'Kwere na-agaghị ekwe omume' Niagara Falls. ”Misty bụ Jones 'pet boa constrictor kwenyere na ọ nọ na inflatable bọọlụ Jones ji ya.
O di nwute, a na-ekwu na agwọ ahụ lara n'iyi nakwa. Ebumnuche GiGi WuPure siri ike ịbịa ọtụtụ ụbọchị. Ọ dịka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla emerela tupu - ma n'ezie edepụtara ya na ụwa dum.
Hiker na mgbasa ozi mgbasa ozi GiGi Wu chọtara ụzọ iji pụọ na ndị njem ọzọ site na itinye bikini. Anyị na-eyi uwe ndị na-eme njem mgbe ị na-arị ugwu, mana mgbe ọ rutere elu, ọ ga-eyiri uwe ya abụọ. Onye kwusara 'bikini climber' hụrụ onwe ya n'anya ịga njem naanị ya ma kwenye na onye ọ bụla kwesịrị ime ya, dị ka Washington Pos t.
N'ezie, ịgagharị naanị ya nwere nsogbu nchekwa ya - ọkachasị ma ọ bụrụ na onye na-eyi uwe yi uwe na-ekwesịghị ekwesị. Anyị dara mita 20 n'ime otu ndagwurugwu n'oge njem njem naanị na Yushan Mountain dị na etiti Taiwan, ọ doro anya nke ọma ịkpọ oku ekwentị mgbe ọdịda ahụ dị, agbanyeghị na ọ kwuru na ya enweghị ike imegharị n'ihi mmerụ ụkwụ. Na nwute, ndị nnapụta enweghị ike ịbịakwute ya ruo otu ụbọchị mgbe e mesịrị - na Wu na-atụ ụjọ na-anwụ ọnwụ tupu a napụta ya. Jon JamesỌ dịghị onye kwesịrị ịgagharị na nku nke ụgbọ elu ọ gwụla ma ọ bụrụ na ọ kwụsiri ike na tarmac na-enweghị ọzụzụ nzuzu.
Ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ - ma ọ bụ ka njọ, gburu - mgbe ha jiri ụgbọ elu na-egwuri egwu nke nwere ike bụrụ azụmahịa dị egwu. ”Onye na-egwu egwu na-akpọ Jon James chere na nku ụkwụ na-aga ije ga-eme ka egwu egwu dị egwu. Ọ bụ ezie na a kọrọ na ọ zụrụ ụfọdụ maka omume obi ike ahụ, ọ nọghị ọkachamara na-eme egwuregwu - na ọ nweghị mmega ahụ chọrọ iji mebie ọnwụ ahụ.
James kọrọ na ọ gara obere oke na nku, na-eme ka onye na-anya ụgbọelu kwụsị ịchịkwa ụgbọelu ahụ. Onye na-egwu rapper gbalịrị ijide ka Cessna nọ na-agbọ ogho, mana mgbe ọ hapụrụ, James nọdewere ala nso iji parachute ya. Onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ nwetaghachiri ụgbọelu ahụ wee gbadaa n’enweghị nsogbu, mana James jiri ọdachi tụfuo ndụ ya.
Owen Hart Onye ọ bụla maara na a na-agba mgba ọkachamara, mana nke ahụ abụghị ikpe pụtara na enweghi ezigbo ihe egwu. Na Mee 1999, Owen Hart, onye mgba mgba afọ iri atọ na atọ dara ụkwụ 25 site na ntụhie nke KemperArena na Kansas City. O kwesiri ka Hart daba n'ọgbọ egwuregwu tupu egwuregwu ya, mana ejikọtaghị nchekwa nchekwa ya nke ọma.
N'ihi na ndị Fans maara egwuregwu nke mgba mgba, ọtụtụ ndị nọ n'ìgwè ahụ kwenyere na ha na-ele otu akụkụ nke ngosi ahụ. Onye nlere Leo Washington gwara New York Daily News, 'Ka ha na-abanye n'okporo ụzọ, uh, onye ọ bụla nwere obi ụtọ dị ka a na-ewere onye ọkpụkpọ bọl na-apụ n'ọhịa.' Ọ bụ mgbe otu awa gachara ka ndị nkọwa kwadoro na Hart nwụrụ na ọdịda ahụ.
Anastasiya Maximova Cossack Riding bụ ihe ngosi arụmọrụ yana mgbọrọgwụ na agha a na-alụ agha. ịlaghachi na-awụlikwa elu. know mara, ụdị ara ara ahụ pụrụ iche nke ọ bụghị naanị na o yighị ka ọ gaghị ekwe omume, kamakwa ụdị ndụmọdụ ọjọọ.
Cossacks bụ ndị maara ọfụma na - - ma dịka ị mụtarala ugbu a, ọbụnadị ikike dị ukwuu enweghị ike ichebe gị pụọ na ihe ọghọm pụrụ iche. Banyere na 2015 onye Cossack onye na-agba ịnyịnya Anastasiya Maximova dị afọ 24 na ihe ngosi acrobatic mgbe ụkwụ ya jidere ya. Ihe ọghọm ahụ mere Maximova ka ọ daa, ịnyịnya ya nke ụjọ jidere ya gafee ebe egwuregwu ahụ tupu ọ banye n'ime ebe oche ka ndị na-eme egwuregwu ndị ọzọ gbalịrị ike ha ịnwe ya.
Maximova nwụrụ n'ihi mmerụ ahụ ya tupu ya agaa ụlọ ọgwụ. Ọdachi nke na-eme n'oge stunts abụghị obere ọdachi karịa ihe ọghọm ọ bụla ọzọ, mana enwere ihe a ga-ekwu ma ọ bụrụ na ị nwụọ na-eme ihe ị hụrụ n'anya. Ekwuru Maximova ka ekwuru otu oge banyere Cossack ịnyịnya: 'Ọ bụ egwuregwu dị egwu, mara mma ma na-enwu gbaa.
Ọ na-enye m ụjọ. ''
Ole ndị na-aga ụkwụ ụkwụ na-egbu ndị na-agba ịnyịnya ígwè?
Na njedebe nke ọzọ,ndị ji ụkwụ aganandị na-agba ígwèbụrụ obere ihe ọghọm nye ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ - ọ bụ ezie na isendị ji ụkwụ aganọgburuna ihe metụtarandị na-agba ígwèn’afọ. Na ngụkọta nke atọndị mmadụn'ime ugbo ala ugbo ala digburuna nkwekọrịta ya nandị ji ụkwụ aganandị na-agba ígwèna 2019.05.02.2021
Kedu ndị agba ịnyịnya ígwè e gburu na 2020?
N'èzí magazine pegs naOnye na-agba 2020ọnwụ na 675 ruo ụbọchị, mana nke ahụ bụ COVID-19 na-egbutu okporo ụzọ site naukwuudị ka pasent 41 maka ọnwa n'otu oge, dị ka Bloomberg si kwuo.12.22.2020
Mmadụ ole na-agba ịnyịnya ígwè na-egbu ndị mmadụ?
Na 2016, 18,477ndị na-agba ígwèmerụrụ ahụ na mberede okporo ụzọ a na-akọ, gụnyere 3,499 ndịgburuma ọ bụ merụọ nnukwu ahụ. Onu ogugu a gunyereEgburu ndị na-agba ịnyịnya ígwèma ọ bụ merụọ ahụ ọghọm okporo ụzọ ndị uwe ojii kọọrọ.18.09.2020
Kedu oge ihe mberede ọgba tum tum na-eme?
N'agbanyeghị oge, bicyclistọnwụ nwụrụ ọtụtụọtụtụ mgbe n’agbata elekere isii nke mgbede. na 9 elekere Anyịnya igweọnwụ na-ada ọtụtụmgben'imeobodo (75%) ma e jiri ya tụnyere ime obodo (25%)n'ime2017. Bicyclistọnwụbụ 8ogeelu karịa ụmụ nwoke karịa ụmụ nwanyịn'ime2017.
Ebee ka ọtụtụ ihe ọghọm ịgba ígwè na-eme?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nkeọnwụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-emen'okporo ụzọ ime obodo. Around 80% nkeihe mberede igwe na-emena ìhè - nke bụ mgbeịgba ígwè kachana-ewere ọnọdụ. Maka nwandị na-agba ígwè, 90% nke haihe mberede na-emen'ụbọchị.03.11.2017
Kedu ka esi egbu ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè?
Na aọtụtụ n'imeịnyịnya ígwèọnwụ,ọtụtụnnukwu mmerụ ahụ dị n'isi, na-egosipụta mkpa ọ dị ịkpa okpu igwe.
Mmadu ole na-anwu n'ihe mberede igwe kwa afo?
Ọnwụ ndị ọgba aghara n'etiti ndị nọ n'okpuru afọ 20 ajụla 89% kemgbe 1975, ebe ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwụrụ n'etiti ndị dị afọ 20 na okenye ejirila okpukpu atọ. IIHS chọpụtakwara na n'ime afọ ọ bụla kemgbe 1975, ụmụ nwoke na-egbu na mberede igwe na ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ụmụ nwanyị ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ihe mberede nwere ụgbọ ala.
Kedu onye nwere ike ịnwụ n’ihe mberede ọgba tum tum?
Na 2019, ndị ọgba tum tum nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 29 ugboro karịa ndị njem ụgbọ ala ịnwụ n'ihe mberede kwa kilomita njem. Mara: Ọnụọgụ ọnụọgụ ọnya ọgba tum tum na-egbu site na Insurance Institute for Highway Safety.
Kedu mgbe ọtụtụ ihe mberede igwe kwụ otu ebe na-eme na California?
Na California, 78.6% nke ihe mberede igwe mere n'oge ehihie. 15,1% mere na abalị na ọkụ n'okporo ámá. 1.7% n'okporo ụzọ ebe ọkụ ọkụ na-adịghị. Ihe ọghọm nke chi jiri n’ehihie ma ọ bụ chi ọbụbọ na-akpata 3.8% nke ihe ọghọm.